घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू फर्नोन्डो टोरास बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्याङ्क
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; एलिनो। हाम्रो फर्नाडोना टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणले उनको जीवन-अफिस पिच जीवनमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको हिसाब बढ्दो र ढोकाको बारेमा चिन्ता छ तर केही फर्नोन्डो टोर्रेस बायोलाई विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -बाल्यकाल
फर्नाडोना जोसे टोरास संजको जन्म भएको थियो 20 मार्च को 1984th दिन फेनलेबर्डामा, स्पेनको राजधानी मैड्रिडको सहरमा एक शहर।
उहाँ अन्तिम जन्मेको बच्चा र घरको बच्चा आफ्नी आमा, फ्लोरी सान्ज टोर्रेस र बुबा, जोसे टोरेसमा जन्मनुभएको थियो।
Torres Fuenlabrada, एक शहर मा जहां रियल म्याड्रिड निवासियों द्वारा समर्थित मुख्य क्लब हो। तथापि, तिनले एथलेटिको रोजे। स्ट्राइकरले पहिलोपटक5उमेरमा एक फुटबल लगाउनुभयो र चाँडै स्थानीय क्लब पार्क 84 सामेल हुनुभयो।
तपाईं जान्न को लागि आश्चर्यचकित हुनेछ कि Torres 'पहिलो स्थिति एक स्ट्राइकर तर एक गोलकीपर थिएन। यो उनको ठूलो भाइ पहिले खेलेका यस्तै भूमिका थियो।7को उमेर सम्म टोरेस उस स्थिति मा बने रहे पछि पछि उनले स्ट्राइकर को भूमिका मा बदल दिए। तिनको बुबा, जोसे टोरेस पनि तिनको बचपनमा उनीहरूले निजी रूपमा प्रशिक्षित गरे। उनीहरु जस्तै, उनको आमा, फ्लोरी स्यान्जले आफ्ना साथ प्रशिक्षण सत्रमा दैनिक यात्रा गरे।
उनको दादा एक भावुक फुटबल प्रशंसक थिएन तर उनीहरूको गर्व गर्थे Atletico मैड्रिड समर्थक। वास्तवमा, टोरर्सले एथ्लेटिकोको लागि प्रेमलाई पाएको हो।
आठ वर्षमा, उनले पड़ोस क्लबको लागि इनडोर लीगमा स्ट्राइकरको रूपमा नियमित रूपमा खेलिरहेको खेल, मारियोको होल्यान्ड, एनिमबाट वर्णहरू प्रयोग गर्दै कप्तान सुब्बासा तिनको प्रेरणाको रूपमा उनीहरूको टोलीमा हावी र पङ्क्तिहरू उठाउन।
दुई वर्षपछि, उमेरको 10, उहाँले 11-साइड टीम, रेई 13 मा प्रगति गर्नुभयो। उनले एक सीजनमा 55 लक्ष्यहरू गोल गरे र तीन रेको 13 प्लेयरहरू एटलियकोसँग परीक्षण गर्नका लागि थिए। उहाँले स्काउट्स प्रभावित गर्नुभयो र 11 मा 1995 उमेरमा क्लबको युवा प्रणालीमा सामेल हुनुहुन्थ्यो।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी: प्रारम्भिक एटीएम टाइम्स
यो जब उनको एथ्लेटियो म्याड्रिड यात्रा सुरु भयो। टोराहरू उनीहरूको पङ्क्तिमा उभिए र तल देखेर प्रमुख ट्राफिकहरू जिते।
फर्नान्डो टोरार्स 'प्रभुत्वमा वृद्धि
लिभरपूल स्काउट्स ले उनको प्रभुत्व को उदय गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फर्नान्डोले आफ्नो जीवन, ओलल्ला डोमंग्युज लिस्टलाई वर्ष 2001 मा भेट्टाए जो कि एथलेटिकोमा एक पेशेवर खेलाडि पहिलो वर्ष थियो। उनीहरू ग्यालिसिया समुद्र तटको सहरमा भेटे Estorde, Cee, जहाँ Torres परिवार छुट्टियों मा हरेक वर्ष स्पेनिश राजधानी देखि शहर को जीवन देखि बचने को लागि।
फर्नान्डो टोर्रेस 'पत्नी, ओलाल्ला डोमिंग्युज तपाईको ठेठ वाग होइन। त्यो शर्मीला छ र मनपरी देखि टाढा रहन मनपर्छ।
फर्नाडो टोरेन्सको सम्बन्ध जीवन
फुटबल विवाह सामान्यतया एक घटना हो। धेरै विदेशी स्थानहरु र मुखवाट खाने को खोजी मा हजारौं पाउंड खर्च गरिन्छ। अझ धेरै, सबैभन्दा सुन्दर पोशाक र सूट। तर फर्नाडोना टोरास कुनै सामान्य फुटबलर छैन।
Torres ले आफ्नो बचपन प्यारी ओलल्ला डोमिंग्यूज, एक निजी समारोह मा, केवल2अतिथिहरु मा सानो एल Escorial टाउन हॉल, माड्रिड को उत्तर मा विवाह। बेकखम्स, रोनी र क्याल्स द्वारा मनपर्ने शुभ उत्सवबाट यो धेरै टाढा थियो।
डोमिंगुजले फैलाउने मनपर्छ र उनीहरूले विवाहित हुँदा ओपन युनिभर्सिटीको स्पेनिसमा अध्ययन गर्दै थिए। डोमिंग्युज दुई छोराछोरीको आमा हो, 2009 मा जन्मे पुत्री नोरा, र 2010 मा जन्मे बेटा लियो।
फर्नान्डो टोरार्स 'परिवार
Xabi Alonso, Torres 'घनिष्ठ मित्र, र लिभरपूल कप्तान स्टीवन Gerrard अस्पताल को आफ्नो छोरा को जन्म को समयमा सबै जोडे। तल फर्नाडोना टोरास र उनको सुन्दर बच्चाहरु को चेल्सी मा उनको समय मा एक फोटो हो।
फर्नान्डो टोर्रेस र उनको प्यारी बच्चाहरु
अझ हालै, एथलेटिको म्याड्रिडको अन्तिम अन्तिम पछाडि। फर्नोन्डो टोर्रेसकी पत्नी ओलाल्ला डोमिंगुजले उनको तेस्रो बच्चा र दोस्रो छोरी, एल्सा टोरेस। तल एल्से, उनको बुबा र तिनको साथी, Antione Griezmann.
फर्नोन्डो टोर्रेस बच्चा, क्लम हेर्दै र एकछिन राम्रो छैन।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -पारिवारिक जीवन
आफ्नो उमेर को ध्यान मा राखन र उनको परिवार को आखिरी जन्म हुनु को लागी, यो अपेक्षा गरेको छ कि फर्नांडो टोरेर्स 'आमाबाबु शायद आफ्नो 60 को हुनु पर्छ। निम्नलिखित उनको आमा, फ्लोरी सान्ज टोर्रेस अभिव्यक्ति को एक तस्वीर हो कि उनको छोरा को कितना प्यार गर्दछ।
फर्नान्डो टोर्रेस 'माम, फ्लोरी सान्ज टोरर्सले उनको छोरालाई प्रेम देखाउँछन्
तलको फोटोले आफ्ना बुबा, जोसे टोरेस (बायाँ), दादा (केन्द्र) र आमा, फ्लोरी स्यान्ज (दायाँ) देखाउँछ।
जोसे Torres (बायाँ), दादा (केन्द्र) र आमा, फ्लोरी सानज (दायाँ)।
भाइरस: फर्नाडोना टोर्रेस भाइ इजरायल जन्म वर्ष 1977 मा जन्मिएको थियो। उहाँ आफ्नो परिवारको दोस्रो बच्चा हुनुहुन्छ, अझ धेरै फर्नोन्डो टोर्रेसका भाइ। तल आइरियल टोर्रेस र तिनको भाइ फर्नांडोको तस्बिर हो।
अस््रियल टोर्रेस र तिनका भाइ भाइ फर्नोडो टोरार्स
अतियथार्थ्य Torres6फर्नान्डो भन्दा पुरानो वर्ष हो।
सिस्टर: फर्नोन्डो टोर्रेस बहिनी मारिया पाज वर्ष जेएनयुमएक्समा जन्मिएको थियो जसले उनको टोर्रेस परिवारको पहिलो बच्चा र छोरी बनाउँछ। तल हेर्दै जवान मारिया पाज टोरेस तल।
मारिया पाज टोरेस र तिनका भाइ फर्नांडो
मारिया पज टोरासको बावजुद जवान युनिभर्सिटी उनको सानो भाइ Fernando भन्दा पुरानो7वर्ष हो।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
फर्नोन्डो टोर्रेसको आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा निम्न विशेषताहरू छन्।
शक्ति: उहाँ दयालु, कलात्मक, सहज, सज्जन, बुद्धि र संगीतमा प्रकृति हुनुहुन्छ।
कमजोरीहरू: फर्नान्डो डरलाग्दो हुन सक्छ, प्रायः भरपर्दो, दुःखलाग्दो हुन्छ र वास्तविकताबाट बच्नको इच्छा छ।
के फर्नाडोना टोरार्सले मनपर्छ: फर्नान्डो टोरेस एक्लै रहन्छ, र अधिक सुत्ने, खाना, गैजेट्स / गेमिंग, मूवी, संगीत, रोमांस, विकिपीडिया भ्रमण गर्दै, ईमेल र स्विमिंग संग मिति राख्ने।
के फर्नाण्डो टोरसलाई नमनपराउने: मानिसहरू दावी गर्छन् उनीहरु-यो-सबै, कुनै पनि प्रकारको क्रूरता, आलोचना गरिरहेको छ र अतीतको फिर्ता आउँदैछ उसलाई घृणा गर्न।
संक्षेपमा, फर्नाडोना टोर्रेस धेरै मित्रवत छ र प्रायः धेरै फरक मान्छेको कम्पनीमा भेट्टाउँछन्। उहाँ सधैं अरूलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, पछाडी केहि पनि प्राप्त गर्न आशा बिना।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -The Bromance
यो रूपमा खारेज हुन सक्छ "भाग्यको लागि फर्नाडोना टोरेन्सलाई छु", तर परम्परागत डेविड लुइजले चेल्सीको 5-0 च्याम्पियन्स लीगमा जेनेकमाथि विजय हासिल गरेको थियो - जसमा टोरोस्टर दुई पटक रन बनाइयो - डेभिड लुइजको विश्वासमा केही पूर्व-म्याग्दी सुपरस्ट्रिशन भन्दा बढी छ।
एक पल्ट चेल्सी मा, टोरेस ले एक लक्ष्य को स्कोर को बिना 903 मिनेट चलाए पछि इससे पहले पश्चिम हाम को विरुद्ध हड़ताल त्यो जादू समाप्त भयो। यसको पछाडि क्षमताको लक्ष्य तल तल प्रार्थना पछि जान्छ।
डेभीड लुइज एक पटक भने ..., "मेरो विश्वासले मलाई विश्वास गर्छ कि म बाहिर जान्छ र मेरो प्रतिद्वंद्वी सहित अन्य खेलाडीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु। यसले मलाई बल र प्रेरणा दिन्छ। " उहाँले पछि थप गर्नुभयो, "जीवनमा सबै कुरा भनेको हो परमेश्वरको। हाम्रो उद्देश्य पहिले नै म्याप गरिएको छ। "
यहाँ, हामी तपाईंलाई फर्नाडोना टोर्रेस र डेभिड लुइजको बीच महाकाव्य ब्रोन्सन्सको फोटोहरू मिलाउछौं।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -एनिमेटेड तथ्यहरू
फर्नोन्डो टोर्रेस रबनाको एक मास्टर हो। यो लात को एक तरिका हो फुटबल जसमा लात खुट्टा टेबलको पछाडि पछाडि लिपिन्छ - प्रभावी ढंगले एक खुट्टाको पार संग।
दाइजो लुइजसँग भएको आध्यात्मिक ब्रोन्सेन्सले एक पटक इन्टरनेट स्थापना गरे।
फर्नोन्डो टोर्रेस पनि उपनाम दिइएको छ। फूड '।
स्पेनिश राष्ट्रिय टोलीमा, उनको सबैभन्दा राम्रो मित्र दाऊद विला हो।
फर्नोडो टोराले पानी चुनौतीलाई प्रेम गर्दछ।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -Mr Foody Facts
Torres खाना खान र भान्सामा खाना पकाउने। उहाँ समुद्री खानाको ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ र आफ्नी श्रीमतीको दादीले भर्खरै पकाइएको पकाएको क्वेलाको गन्धलाई माया गर्नुहुन्छ। तर उनको मनपर्ने भोजन पाक्ने चिकन करी छ। र उहाँका पदहरू मध्ये एक जना स्वीकार्नुहुन्छ कि उहाँ सबै प्रकारका कैंडी मनपर्छ।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -सिनेमा र संगीत
खाना पकाउनु र खाना खाएपछि टोरास पनि चलचित्रहरूको एक ठूलो प्रशंसक हो। जीवन एक अद्भुत फिल्म हो, र उनले विश्वास गर्छ कि यसले उसलाई परिभाषित गर्दछ, तर के हामीले थाहा पाउँछौं त्यो पनि काम गर्दछ?
उनले हास्य चलचित्र मा आइओई प्रदर्शन गरे - टोरेंटे 3: एल प्रोटेक्टर, एक 2005 मा रिलीज भएको स्पेनिश फिल्म। साथै, घण्टी अन्तमा, तल चित्रमा देखिन।
उनले बैंड को लागि एक संगीत भिडियो मा पनि प्रकट गरेको छ, "एल कान्टो डेल लोको," जसको नेतृत्व गायक डेन मार्टिन ले उनको साथ एक मजबूत मित्रता साझा गर्दछ।
चलचित्रहरू अलावा, टोरेसले अंग्रेजी रक संगीतको पनि आनन्द उठाउँछन्। उहाँ बिटल, कासाबियन र ओसिसको एक उत्कृष्ट प्रशंसक हुनुहुन्छ र उनको मनपर्ने गीत पहेंलो पनडुब्बी हो। फर्नोन्डो टोर्रेस पनि रिंग्स शृंखलाको भगवानको एक ठूलो प्रशंसक हो। कहिलेकाहीं उहाँ यात्रा गर्नुहुँदा उहाँ आफ्ना ल्यापटपहरू प्याक गर्नुहुन्छ, चलचित्र, टेलिभिजन सीरीज- तिनका मनपर्नेहरू हराएको र जेल तोड्न हेर्न।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -टैटू
स्याङ् फुटबलको हातमा देख्ने सबै भन्दा साधारण चीजहरू मध्ये एक हो। लगभग सबैसँग आज ट्याटोहरू छन्। फर्नाडोना टोर्रेसका तीनवटा ट्याटोहरू छन्, सबै पछि तिनीहरूका रोचक कथाहरू।
उनको दायाँ टाट भित्रको पहिलो टटू, रोमन अंकहरू VII VII MMI (772001) हुन्। हामी वास्तवमा थाहा छैन कि त्यो मिति को मतलब हो, तर अटकलें भन्छन् कि यो या त उनको प्रेमिका संग एक साथ तिथि हो, ओल्ल्ला या उनको दादा को जन्म, जो उनको प्रिय हो।
आफ्नो दाहिने हातमा, उनको संख्या9ट्याट भयो, जुन स्पष्ट रूपमा यसको शर्ट नम्बर उसले फुटबल क्यारियरमा धेरै पहेंलो गर्यो।
फर्नान्डो टोर्रेसले पनि आफ्नो बायाँ हातमा एल्विन भाषामा पराजित गरेको छ। बायाँ हातमा ट्याटू तान्ग्वारमा "फर्नाडोना" को स्पेनिश मोड हो।
Quenya101.com को अनुसार, टैटू संग थोडा गलती छ। टेंगवा एक्स्पन्ट पहिलोमा हुनु पर्छ "M" खोज चरित्र; बरु, यो दोस्रो छ। सर्जियो Aguero टोरेस देखि उनको तेंग्वार टैटू को लागि विचार मिल्यो। Aguero's tattoo reads "Kun Aguero"Tengwar मा उनको दाहिनी प्रेमी मा।
फर्नोन्डो टोर्रेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य -ग्याजेटहरू र गेमिङ
फर्नाण्डो टोर्रेज यो ग्याजेटमा आउँदा एक बेवकूफ हो। उहाँ ग्याजेट र गेम कन्सोललाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँ प्लेस्टेशन कन्सोलको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ। उनले आफ्नो प्लेस्टेशन पैडमा तीन प्लेस्टेशन गेमिङ कोठाहरू स्थापना गरेका थिए - £ 35,000 सम्म पुग्ने, प्रत्येक फ्लोरमा उनीहरूलाई कब्जा गर्न को लागी। उनले प्रो इभोल्युसन फुटबल, ग्रैंड थेफ्ट ओटो आईभी र हेलो एक्सएनमक्स सहित आफ्ना सबै मनपर्ने प्लेस्टेशन गेमहरूको तीन प्रतिमा मनपर्छ। तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फर्नाडोना टोरेस बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।